Danyartii Gaalkacyood oo guryahoodii lagu dur-durshay
Ilaah baa mahadleh. Nabadgelyo iyo naxariis Nbi Muxamed ha ahaato.
Soomaalidu waxay tiraahdaa haddaad aragtid nin naagtiisa diraac dilaya ha waydiin waxa uu ku dilayo maxaa yeelay waxay u dhowdahay inuusan xikmad ku dilayn ee ay dhici karto inay ka qadisay buunshe ay iyada iyo ciyaalku nafta ku cesheen iyadoo is lahayd raggu ma cuno laakiin nasiib-darro taasi ma dhicin oo haddii ragga laftiisu naftu qabato buunshuhu wuxuu noqdaa wax la isku baanto ama badar caadi ah.
Mar kasta oo kornayl C/hi Boosaaso laga soo cayrsho ama shirarka dib-u-heshiisiinta looga gacan sarreeyo waxuu ku cartaa bushaska dadka ugu faqiirsan Gaalkacyo. Waxay ahayd daboyaaqadii 2001 markii inta Boosaaso laga soo cayrshay uu yiri waxaan duminyaa guryaha sharci-darrada ah. Waligay isma oran qof siyaasi ah baa dadkaas oo kale ku carta. Waxay ahayd inuu dhowr kun oo doolar u qaybiyo Ramadaanka dhexdiisa si uu iskaga dhigo nin Ramadaanka qaddarinaya oo masaakiinta jecel. Markii aan Gaalkacyo ka hadlayo waxaa mar walba i horyimaada gabaygii Cismaan Yuusuf Keenadiid Allaha u naxariistee oo aad mooddo inuu saaka tirshay. Bal aan qodobadaan milicsano:
1. Waqtiga ay la beegteen inay howlgalkaas fuliyaan. Waa Ramadaan, iyadoo dadkaas danyartaa iskaga dhex jiraan nolol-maalmeedkoodii baa salow ka dhex yeeray. Ma sugi waayeen intay dadku ka ciidayaan?
2. Dadka sharciga lagu fuliyey waa kuwii danyarta ahaa. Waa ficilkii reer Banuu Israa’iil. Waxaan ognahay Gaalkacyo in dadka qabiilkooyinka badan oo hubaysan ka soo jeedaa qaarkood jid bartanki guryo ka dhisteen ama iskuulo dhexdood dhisteen iyadoon cidna la hadlin halka dadka maasaakiinta ah aysan dhul xoogin kaliya inay rabaan inay iska sii degaan inta dowlad dhalanayso oo shaqo iyo horumar imaan doono.
3. Waxaa lagu jiraa waqti abaar ah oo hanti intaas le’eg ma ahayn in la baduugo/burburiyo.
4. Haddii kornaylkii saan noqday waxaa la waayey hogaamiye dhaqameedyadii, oo nin walba laftiisii buu raacay iyagoo ku soo baxay wax aan jirin ama wax kornaylka ka amar qaata. Kuwii kusoo dhowaa hogaamiye dhaqameedyaduna waa kuwa dadka ka cayrsanaya dhulka.
5. Dowladda Hoose ee Gaalkacyood way u jeedday dadkaas dhisanaya waliba waxay ka qaadi jireen canshuur.
6. Dadweynihii oo in badan oo ka mid ahi afka iska qabsadeen iyagoo is leh Alloow yaa mar kornaylka dhan idiin dhaafsha qaarkoodna waa kuwa aan ku sheegnay inay u dabbaaldegeen saxiixii 15/09/03 markii kornaylku u sameeyey is-bahaysi cusub.
7. Waa maamulka Puntland waxa dhulka dadweynaha sharci darro u gata sidii xeradii daraawiishta. Marka kornaylku hadduu xeradii gatay ma u dayn waayey dadkaas masaakiinta ah inay bushashkooda sii degenaadaan inta abaaraha laga baxayo oo bisha barakaysani dhamaanayso oo la siiyo waqti ku filan oo ay cooshkooda kula tagaan.
Kornaylku wuxuu is leeyahay dadka Gaalkacyood taageero kaga hel falalkaas waxashnimada leh laakiin Wallaahi waa dambi weyn. Waan ognahay ducada qofka la dulmiyey. Ka warran haddii dadkaasi yahay dad dhulkoodii ka soo qaxay oo danyar ah oo ah kuwa la yasso? Haddii Ramadaan lagu jirana ka warran? Kornaylka iyo cawaantiisu ha xassuusteen in aayadda ah “WA IDAA SA’ALAKA CIBAADII CANNII FA’INII QARIIBUN UJIIBU DACWATADDAACI IDAA DACAANI FALYASTAJIIBUU LII WALYU’MINUU BII LACALLAHUM YARSHUDUUN” oo ah hadday Nabi Muxamadoow (SCW) addoomahaygu ku waydiinaan Aniga xaggayga, Anigu waan dhowahay oo waxaan ajiibaa qofka ibaryaya. Aayaddaas waxaa Ilaah dhexgeshay aayadaha ka hadlaya Ramadaanka. Marka dadkaas danyarta ah waxaa la dulmiyey Ramadaan dhexdii. Waxaan shakki ku jirin inay Ilaahay u dacwoodeen.
Horta waxaan Ilaahay uga beryeynaa dadkaas masaakiinta ah inuu ka samirsiiyo dhibtaas ku dhacday, bedel kheyr qabana siiyo. Waxaa dhici karta in kornaylka, cawaantiisa iyo ganacsata dariiqaas qaabka darran u isticmaashay inay masaakiintaas uga qaadaan dhulkooda inay ka helaan Ilaah agtiisa jasahoodii mar dhow ama dheer.Teeda kale reer Gaalkacyo haddaysan dulmiga iska qaban ha ogaadeen in Qur’aanku sheegay in dhibtu dadkoo dhan gaarayso. Marka ha arko meeshay arrintu ku dambayso.